Ubutofotofo, obugcwele ukukhanya, ikhaya eliphakathi kwedolophu yaseCorowa
Indlu eseGrey: Ikhaya lethu elihle elihlaziyiweyo kumbindi weCorowa kukuhamba nje okufutshane ukuya kwisitrato esikhulu, ngaphakathi komgama olula wokuhamba we-RSL, iindawo zokutyela, kunye noMlambo iMurray omkhulu. Indawo yethu ifaneleke ngokukodwa isibini. Ibonelela ngokudityaniswa okukhethekileyo kwesicwangciso esivulekileyo kunye neendawo ezinenjongo ezahlukeneyo! Ukupholisa okupholisiweyo kunye nokufudumeza ngeefeni zesilingi kulo lonke isiqinisekiso sonyaka wonke sokuthuthuzela kwemozulu. Eli khaya liyamangalisa ukubuyela ekhaya emva kosuku olukhulu, kodwa uya kuhendeka ukuba ujikeleze endlwini.
Sivule iindawo zokuhlala kunye nesibhakabhaka esibanzi seglasi sijonge kwindawo eqingqiweyo, intendelezo esemantla egcwele umdiliya kunye neendawo zokuhlala ezilungele ukuhlala ngaphakathi / ngaphandle. Ikhitshi yethu yenzelwe umncedisi kwaye sinikezela zonke izixhobo: i-air fryer, i-Thermomix, i-deep fryer, umatshini we-espresso, ifriji ye-French 2 umnyango kunye nokunye. Isikrini esibanzi se-SMART TV siyakwenza ukuba ukonwabele usetyenziso oluthandayo! Indawo yeofisi ixhotyiswe nge-wifi yasimahla, kunye nedesika nganye. Uyilo lwethu lweplani yomgangatho luya kukuvumela ukuba ujonge ilaptop ngaphandle kokwahlulwa kude kakhulu kwenye indawo yokuhlala.
E-Corowa unokufikelela kwibala legalufa elikumgangatho wehlabathi, ukhetho lweeklabhu ezimbini zebhola ekhatywayo, indawo entsha yokuqubha, ii-pubs ezininzi kunye neendawo zokutyela, ukhetho lweeklabhu ezimbini ezikufutshane zokugwedla. I-Corowa yimizuzu nje engama-30 ukuya eYarrawonga Mulwala, i-45 mins uqhubela e-Albury; Imizuzu engama-30 ukuya eWangaratta kwaye ukusuka apho, iindawo zekhephu zeVictorian. I-Wahgunyah ngaphaya komlambo kulapho uyakuqala ukudibana nazo zonke iindawo zewayini ezimangalisayo kunye ne-Old Empire Hotel kunye ne-The River Fish kunye ne-Chip Co. Kukho okungakumbi e-Corowa, kwaye sinokukunika ulwazi oluthe kratya xa uqinisekisa ukubhukisha kwakho!
Siya kufumaneka kuwe ngexesha lokuhlala kwakho, ngefowuni, umbhalo, i-imeyile okanye intlanganiso yevidiyo. Sinosapho, abamelwane kunye nabahlobo abaza kukwazi ukukunceda ukuba udibana nabo nabuphi na ubunzima ngexesha lokungabikho kwethu eCorowa.
Siya kufumaneka kuwe ngexesha lokuhlala kwakho, ngefowuni, umbhalo, i-imeyile okanye intlanganiso yevidiyo. Sinosapho, abamelwane kunye nabahlobo abaza kukwazi ukukunceda ukuba udi…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-18816
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 13:00 - 17:00